Amathiphu ama-4 Wokwenza Okungcono "Ukuzijabulisa" | Martech Zone
Amathiphu ama-4 wokuzijabulisa kangcono
NgoMsombuluko, Januwari 9, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 UHanna Johnson
Uma ufunda Martech Zone, amathuba okuba umuntu okukhombisile ukuthi selizobaluleka kakhulu kunakuqala ukuze ibhizinisi lakho lihlangane kulo nyaka. A Ucwaningo lwamuva siqhubele i- I-GrowBiz Media uveze ukuthi ama-40% wabathathi bezinqumo abasebancane kuya kwabaphakathi bahlela ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana ngo-2012. Ngisanda kuzwa isivakashi ku IBusiness Insanity Radio Talk Show ziphakamisa ukuthi bonke abantu abathengisayo banikezwe ama-akhawunti enkampani yezenhlalo (Twitter, Facebook, njll), ukuze amaklayenti abo abe nendlela esheshayo, elula, esobala yokufinyelela kubo ngaso sonke isikhathi.
Kunemithetho embalwa, uma ikhona, enzima futhi esheshayo yokusebenzisa iSocial Media. Umsebenzi wami njenge-Social Media Marketer ye Zoomerang, namanje SurveyMonkey, kusho ukuthi ngifunde into eyodwa noma ezimbili mayelana nokuthi yini esebenzayo futhi, okubaluleke kakhulu, okungasebenzi. Imfihlo ye-Social Media Success ukuvulelwa ukuzama izinto ezintsha, ukukala imiphumela yakho, nokusebenzisa amamethrikhi ukuthola ukuthi yini okusebenzela wena, umkhiqizo wakho, nezithameli zakho. Kepha nginezinyathelo ezi-4 ezilula zokuqalisa:
1. Ungacabangi. Buza
Imfihlo yokwakha okulandelayo okukhulu kwezenhlalo ukuletha okuqukethwe okufanele, okuthokozisayo kuzethameli zakho. Kepha ungakwenza kanjani okuqukethwe okuhle uma ungazi ukuthi izithameli zakho zingobani? Buza! Dala ifayela le- inhlolovo elula bese uyithumela kubalandeli bakho, kubalandeli, nakumakhasimende. IZoomerang neSurveyMonkey zinikela ngamathani wezifanekiso zamahhala ongazenza ngokwezifiso ngokungeza izithombe, ilogo yakho, nemibala yenkampani.
Buza ukuthi angobani amakhasimende akho, uwusebenzisa kanjani umkhiqizo noma isevisi yakho, nokuthi aneliseke kangakanani. Lapho wazi okwengeziwe ngamakhasimende akho nokuthi yini abayifunayo, kuzokwazi ukuthi ubanikeze ulwazi abaluthola lulusizo futhi luheha kangcono.
2. Phromotha, Nyusa, Phromotha
Ukudala okuqukethwe okuhle kuyisinyathelo esibaluleke kakhulu, kepha yisinyathelo sokuqala kuphela. Lapho usudale lokho okuqukethwe, kuzofanela ukukhuthaze kude futhi ubanzi ngangokunokwenzeka. Kusho ukuthi Tweeting ngakho, ukukuthumela ekhasini lakho le-Facebook, namakhasi weqembu le-Linkedin afanele. Khumbula umthetho we-80-20, othi kufanele uphendule kokuqukethwe kwabanye abantu u-80% wesikhathi, futhi uphromothe okuqukethwe kwakho okungama-20% kuphela wesikhathi. Kungumthetho wemvelo wesithupha — akekho ofuna ukuzwa ukuzithuthukisa kwe-mumbo jumbo usuku lonke.
Kepha ngokuzijwayeza ungafiphaza umugqa kancane, futhi uhamba ngazo zombili izindlela. Beka amazwana kubhulogi noma kokunye okuthunyelwe yi-Facebook kwabalandeli bakho, futhi uma kufanelekile, faka isixhumanisi esizeni sakho. Phinda uthumele imininingwane nge-tweet abanye abantu abasembonini yakho abayishilo, uma kungewona umncintiswano oqondile futhi uzoba wusizo kumakhasimende akho. Bheka izimpendulo ze-Linkedin, futhi lapho othile enenkinga lapho insizakalo noma umkhiqizo wakho ungasiza ukuyixazulula. Vele uqiniseke ukuthi ubuyisela umusa ngokuphawula, uphinde uthumele i-tweet, futhi uthande isabelo sakho esifanele (80%).
3. Ukumaketha Okuphumayo Yi-Soo 2011
Kulezi zinsuku kumayelana nokumaketha okungenayo, okufanele kufike ngokwemvelo uma usuzuze izinyathelo 1 no-2. Ngokunikeza amakhasimende akho imininingwane ethokozisayo, efanelekile, futhi uyithuthukise ngeziteshi ezifanele, ngeke kuthathe isikhathi eside ngaphambi kokuthi uzimise njengochwepheshe othembekile emkhakheni wakho. Abantu bazofika kubhulogi lenkampani yakho ezenzakalelayo, hhayi nje lapho befuna ukuthenga imoto, kepha lapho befuna ukwazi ukuthi abantu bathini ngamamodeli ka-2012. Bazoqala ukuchitha isikhathi esithe xaxa kusayithi lakho, futhi bajwayele ukulihlola ngoba bayazi ukuthi uthumela njalo (nudge nudge, wink wink). Ukuthengisa kwakho kuzohambisana nesikhathi abantu abeza ngaso kusayithi lakho, futhi lokho kuzohambisana nokuthi wenza kanjani isinyathelo 1 no-2.
4. Ungesabi Okubi: Yiba Osebenzayo!
Abantu abaningi abathatha izinqumo ze-SMB engikhuluma nabo bayesaba ukuthi ukuya emphakathini kuzobavulela kuzo zonke izinhlobo zokukhishwa okungekuhle. Ngizibonele ngawami lo mathupha — cishe akusapheli isonto lapho kungekho khona ikhasimende elivelile ekhasini lethu le-Facebook, noma ngabe lihlobene ngqo nomkhiqizo wethu noma cha. Lokhu kungangethusa, ngiyazi, kepha kufanele ukhumbule ukuthi amakhasimende ayabazisa ubungozi obuthathayo ngokuzibeka lapho, futhi bazokuhlonipha ngakho. Ekupheleni kosuku, bazobe besola kakhulu inkampani engathathanga inhlalo yomphakathi kunaleyo evame ukushisa ekhasini labo le-Twitter. Futhi kuwo wonke amakhasimende angenelisekanga, sinabantu aba-5 abanelisekile abathumela ukwaneliseka kwabo ngomkhiqizo wethu. Ukuphawula kwabo kuzuzisa kakhulu kumkhiqizo wethu kunalokho okungekuhle okulimazayo.
Mane ukhumbule ukubhekana nempendulo ngesikhathi esifanele, nangendlela eyakhayo. Ikhasimende lingahle lingalungi ngaso sonke isikhathi, kepha noma yikuphi ukukhungatheka abazizwa ngakho kunesizathu, ngakho-ke kwazise lokho, futhi unikeze izinyathelo ezizosiza abangazithatha ukulungisa isimo. Futhi akuyona yonke impendulo ezoba yimbi! Lapho othile ekuncoma, mbonge ngakho, bese ubabuza ukuthi bangathanda yini ukwenza i- indaba yokuphumelela kwamakhasimende nawe. Bathola izwi labo (nomkhiqizo) laphaya, uthola ukugunyazwa kwabo okuphilayo, futhi wonke umuntu uyaphumelela.
Ngiyethemba lezi zeluleko ze-4 zikusiza ukuthi uqalise ukufuna kwakho ukuba senhlalo! Sicela ubeke amazwana impendulo yakho, amanye amathiphu, noma imiphi imibuzo onayo! Ukuzijabulisa okuhle!
Tags: imikhuba engcono kakhulusocial mediaezokuxhumana imikhuba emihle kakhuluamathiphu ezokuxhumana nabantuamathiphu omphakathi
Sawubona Hanna! Sivumelana ngokuphelele namaphoyinti owenzile lapha. Imithombo yezokuxhumana iyipulatifomu enhle kakhulu yamabhizinisi yokwakha ukuqwashisa ngomkhiqizo nokufeza ezinye izinhloso eziningi abangaba nazo. Ukuyisebenzisa ngempumelelo, kubonakala kungumsebenzi onzima kwabanye. Silindele ukuthi unyaka omusha ulethe izindlela ezintsha zokusebenzisa izinkundla zokuxhumana. Amabhizinisi kufanele elulekwe kahle ukuthi angene ebhodini ukuze abe sethubeni lokuthola inzuzo. Noma kunjalo Okuthunyelwe okuhle!
Okungenayo yikho kanye ebesikuhlelele lo nyaka. Simane sibhala isu lethu lezokuxhumana futhi ngithole ukuthi lokhu okuthunyelwe kuwusizo kakhulu, ngakho-ke bengicabanga ukuthi ngizokutshela njengoba ngithanda abantu ukuba baphawule kokuthunyelwe kwami!
Ngizothatha iseluleko sakho ngokuhlola izilaleli zethu. Umbono omuhle.